ब्यापार प्रकारहरू तुलना गर्नुहोस् - निगमहरू, LLCs र साझेदारी
यस चार्टलाई प्रयोग गर्नुहोस् तुरुन्त सम्मिलित गर्नु भन्दा पहिले इकाई विशेषताहरू तुलना गर्नका लागि। व्यापार प्रकार, कर, तुलना र कर्पोरेसन प्रकारहरूमा थप जानकारीको लागि, कृपया तलका लिंकहरू भ्रमण गर्नुहोस्:
सबै व्यवसाय एन्टिटी प्रकार परिभाषित
एस निगमलाई LLC सँग तुलना गर्नुहोस्
कर्पोरेसन प्रकार वर्णन गरियो
निगम बनाम LLC कर
व्यवसायलाई मुद्दा हाल्ने क्रममा मालिकहरूको लागि मुद्दा संरक्षण? NO हो, हो, हो,
व्यवसायिक सम्पत्तिहरूको लागि सम्पत्ति सुरक्षा जब मालिक विरुद्ध मुद्दा दायर गरिन्छ? NO NO NO हो,
थप व्यापार कर कटौती उपलब्ध छ? NO हो, हो, हो,
व्यापार नाफामा कसलाई कर लगाईन्छ? मालिक निगम हिस्सेदार तपाईंको छनौट - मालिक वा कम्पनी
कहिले प्रयोग गर्ने? सिफारिस गरिएको छैन एक व्यवसायको स्वामित्व, व्यक्तिगत आयकरको तुलनामा कम कर्पोरेट कर्पोरेट करहरूको फाइदा लिन, सार्वजनिक ट्रेडिंग कम्पनी, चिकित्सा खर्च कटौती गर्न। एक व्यवसायको स्वामित्व पाउनुहोस् जहाँ मालिकले प्रायः कर्पोरेट नाफा आफैंमा आफैलाई बाँड्न सक्छ। घर जग्गा मालिकको। सम्पत्ति सुरक्षाका लागि नगद पकड्न। एकको कर्पोरेसनमा स्टक स्वामित्वको लागि।
लाभ थोरै - उच्च दायित्व र यहाँ सूचीबद्ध विकल्पहरू भन्दा कम कर कटौती। 15% कर्पोरेट कर मात्र आयको पहिलो $ 50,000 मा। करहरूमा 15.3% बचत गर्नुहोस्। 12.4% सामाजिक सुरक्षा र 2.9% मेडिकेयर आयको यस अंशमा 15.3% को कुल बचतको लागि बचत गर्न एउटा सानो तर व्यावहारिक तलब र आफैलाई बाँड्नुहोस् "शेयरधारकलाई वितरण" को रूपमा। जब मालिक (सदस्य) मुद्दा चलाइन्छ भने त्यहाँ कानूनमा एलएलसी भित्र रहेको सम्पत्ति जफत हुनबाट बचाउन कानूनमा प्रावधानहरू छन्।
कराधान एकल स्वामित्वको रूपमा - सबै आय मालिकमा बग्दछ। निगमले कटौती पछि आफ्नै ट्याक्सहरू भुक्तान गर्दछ। (सबै "नाफाको लागि" कर्पोरेसनहरू पूर्वनिर्धारित रूपमा सी निगमहरूको रूपमा कर लगाइन्छ।) शेयरधारकहरु कटौती पछि करहरु तिर्छन्। (एस निगम स्थिति प्राप्त गर्न एक चुनाव फाइल गर्नु पर्छ)। शेयरधारकहरू मात्र अमेरिकी नागरिक वा निवासी एलियन हुन सक्छन्। तपाईको रोजाई। एकल स्वामित्व, साझेदारी, सी कर्पोरेशन वा एस निगमको रूपमा कर लगाउन सकिन्छ। पूर्वनिर्धारित द्वारा - एकल स्वामित्वको रूपमा कर ** मात्र एक मालिक, एक साझेदारीको रूपमा यदि दुई वा बढी मालिकहरू। एक कर निगमको रूपमा कर तिर्न एक कर फाराम र एस निगमको रूपमा कर लगाउनको लागि एक थप फारम फाइल गर्नुहोस्
स्वामित्व एकल साहु हिस्सेदार हिस्सेदार सदस्य
नेतृत्व एकल साहु अफिसर / निर्देशक (सामान्यतया उही व्यक्ति हुन सक्छ) अफिसर / निर्देशक (सामान्यतया उही व्यक्ति हुन सक्छ) प्रबन्धक / सदस्य (सामान्यतया उही व्यक्ति हुन सक्छ)
राजधानी उठाउँदै पैसा उधारो जुन सामान्यतया व्यक्तिगत रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ मालिकको व्यक्तिगत ग्यारेन्टीविना पूंजी बढाउन स्टकको सेयर बेच्नुहोस् (लागू कानूनको अधीनमा) मालिकको व्यक्तिगत ग्यारेन्टीविना पूंजी बढाउन स्टकको सेयर बेच्नुहोस् (लागू कानूनको अधीनमा) स्वामित्वको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी बिना पूंजी जुटाउन सदस्यता ब्याज बेच्नुहोस् (लागू कानूनको अधीनमा)
निर्देशिका कागजातहरू कुनै पनि Bylaws Bylaws परिचालन सम्झौता
स्वामित्व कागजातहरू कुनै पनि साझा साझा अपरेटि agreement सम्झौता / सदस्यता एकाइहरू
डबल कर आवश्यक छ? NO होईन - मात्र लाभांश भुक्तान गरियो भने। यसैले लाभांश भन्दा वेतन र बोनस तिर्नुहोस्। NO NO
के व्यवसायले मालिकलाई तलब घटाउन सक्छ? होईन - व्यवसाय र मालिक कर उद्देश्यका लागि एकै हुन्। हो, हो, हो,
* अक्षर "C" र "S" ले IRS कर कोडमा अध्यायहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। सी कर्पोरेसनहरू र एस कर्पोरेसनहरू कर्पोरेसनका प्रकारहरू होइनन् तर कर्पोरेट करको प्रकारहरू हुन्।
** कसरी एकाइलाई कर लगाईन्छ र यसले मालिकलाई मुद्दाहरूबाट कसरी जोगाउँदछ भन्ने दुई फरक समस्याहरू छन्। उदाहरण को लागी, एकल स्वामित्व मालिकहरु को लागी मुद्दा संरक्षण प्रदान गर्दैन। जहाँसम्म, एक LLC जुन एकल स्वामित्वको रूपमा कर छ।